KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - DAWLAD GOBOLEEDKI GUULDAREYSTAY!
Saturday 20 June 2015 14:43
Bosaaso, Dawlad goboleedka Puntland waxaa sameystay qabaail isku hayb ah si loo helo dawlad goboleed ka shaqeysa amniga iyo horumarinta deegaanada Puntland. balse tan iyo asaaski Puntland 1998 shacabka Puntland ma aysan gaarin himilooyinki loo asaasay dawlad goboleedka Puntland, himilooyinkaas oo ay ka mid yihiin Amni buuxa, Cadaalad, Horumar iyo doorashoyin xor ah oo shacabku doortaan cida hogaamineysa. Nasiib daro maamuladi Puntland soo maray midba midka ka dambeya wuxuu ku guuldareystay inuu mideeyo shacabka Puntland kana shaqeeyo horumarka deegaanada Puntland.
Dawlad goboleedka Puntland waxay lumisay fursado qaali ah oo aan dib usoo mari doonin sababto ah Puntland marki la aasaasay waxaa gacanta Puntland ku jirey dhamaan deegaanada Puntland, dhaqaalaha Puntland waa uu ka fiicnaa dhaqaalaha Puntland ee maanta ka jira, qabaailka Puntland waxay ahaayeen dad is jecel balse maanta waxaan wada og soonahay in dawlada Puntland ay iskugu soo ururtay caasimada Garoowe iyo gobolka bari.
Gobolada Sool iyo Sanaag waxay gacanta ugu jiraan maamulka Somaliland, dawlada Puntlandna wey ku fashilantay iney dib ula soo noqoto gobolada Sool iyo Sanaag, hadana sida aan la socono Gobolka Mudug wuxuu noqdey gobol lagu muran san yahay (Disputed Land). Dawlada Puntland maamulkedana kama shaqeeyo gobolka Mudug marka laga reebo xaafad ka mid ah xaafadaha Gaalkacyo.
Waxaan la wada soconaa maalmahan in madaxweyne Abdiweli Mohamed Ali Gaas uu magacaabay gole wasiiro cusub kuwaas oo ay ka muuqato cadaalad daro weyn oo ka fog xaqiiqada ka jirta Puntland iyo nidaamki saami qeybsiga beelaha. Golaha wasiirada cusub ee Puntland waxaa ka muuqda wasiiro kaso jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Mudug oo loo magacaabay wasaarado muhiim ah halka qabaailka dega gobolada Bari iyo Gardafuu saamigi ay ku lahaayeen golaha wasiirada la duudsiyey. Hadaba ma noqon kartaa cadaalad in dad aan goboladoodi dawlada Puntland gacanta ugu jirin oo aan 1 dollar oo canshuur ah aysan deegaanadooda kasoo xaroon in loo magacaabo wasaarado muhiim ah iyadoo la duudsiyey xaqii dadka degan gobolada Bari iyo Gardafuu? oo ah deeganada kaliya ee sida buuxda gacanta dawlada Puntland ugu jira, canshuurta dawlada Puntland ay ku shaqeyso 90% waxay kaso xaroodaan gobolada Bari iyo Gardafuu.
Hadii maamulki lawada dhistay uu fashilmay oo uu noqdey dawlad hadba dad aan wax maslaxad ah u hayn shacabka Puntland ay usoo shaqo tagaan ama wasaaradaha dawlada Puntland lagu qanciyo dad aan deegaankodu gacanta ugu jirin Puntland, maxaa la gudboon dadka gobolada Bari iyo Gardafuu?
Waxay ila tahay in la gaaray wakhtigi xaqiiqada aan wajihi laheyn oo dadka dulman ee weli ku hoos nool dawlad goboleed fashilantay ay aayahooda ka tashan lahaayeen maadaama uu meesha ka baxay hanaanki dawladnimo ee Puntland loo aasaasay, waa in gobolada Bari iyo Gardafuu ay isku tashadaan oo maamul goboleed u gaar ah sameystaan si ay ugu biiraan dawlada federaalka iyaga oo ah maamul madax banaan.
Wa bilaahi Towfiiq, Waxaa qorey: Eng. Abdiasis Farah Haji Said.